DA-DO21001 / 25001/29001 iron tayo sare leh ee kabka 2020 iibka kulul
Waxaa lagu sameeyay bir culus oo culus, foornada Nederland waxay si fiican u haysataa kuleylka waxayna u qeybisaa si siman, kuleylka wuxuu si ballaaran ugu faafaa guud ahaan sagxadkiisa, fidsan iyo dhamaan dhinacyada sare ee natiijooyinka karinta ugu wanaagsan. oo aan ka jawaabi doonin cuntada .Tani waxay gacan ka geysaneysaa hubinta dhadhanka saafiga ah waxayna dheriga ka dhigeysaa xulasho weyn oo lagu kariyo, lagu kariyo laguna keydiyo cuntada.
Foornada Nederlandka ayaa loogu jecel yahay naqshadeynta kaamil ah iyo haynta kuleylka aan caadiga ahayn ee qufulaya qoyaanka iyo dhadhanka si ay u soo saaraan natiijooyin ka sarreeya min shooladda ilaa foornada ilaa miiska. Loogu talagalay jiilalka cimri dhererka, dhaldhalaalka dhaldhalaalka ee saafiga ah ee fudud ee loo nadiifiyo uma baahna wax xawaash ah, wuxuu yareynayaa dhejinta oo waa weel dhaqe-aamin ah.
DA-DO10001 / 13001/14001 bey'ad-saaxiibtinimo 2020 cook cook cookware
DA-C25001 / 29001/33001/37001 birta wax lagu kariyo oo tayo sare leh
DA-C27002 30003 37001 Cuntada wax lagu kariyo ee lagu kariyo Shiinaha
DA-DO24007 / 26007 birta lagu kariyo eedo saaxiibtinimo 2020 iibinta kulul
DA-DO19001 / 20001/21002/24001/27002/27003 tayo sare leh oo kariyaha kariyaha
DA-DO32002 / DA-DO34001 DISA waxay ku kacaysaa biraha bey'ada saaxiibtinimo
Foornada Nederlandka ayaa loogu jecel yahay naqshadeynta kaamil ah iyo haynta kuleylka aan caadiga ahayn ee qufulaya qoyaanka iyo dhadhanka si ay u soo saaraan natiijooyin ka sarreeya min shooladda ilaa foornada ilaa miiska. Loogu talagalay jiilalka cimri dherer, dhaldhalaalka dhaldhalaalka ee saafiga ah ee si fudud loo nadiifiyo uma baahna xawaash, wuxuu yareynayaa dhejinta oo waa weel dhaqe-aamin
DA-DO24002 tayo sare leh 2020 cook cook cookware